Magaalada Baladweyne oo Weli Baadi Goob ka Socda | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Magaalada Baladweyne oo Weli Baadi Goob ka Socda
Magaalada Baladweyne oo Weli Baadi Goob ka Socda
muqdisho(Halqaran.com)-Waxaa Weli socda gurmad lagu soo badbaadinayo qaar kamid ah dadkii shalay Doonta kula qalibantay fatahaada ka dhalatay Biyaha Wabiga Shabeelle, kuwaasi oo kusii jeeday deegaanka Ceel-Jeelle ee duleedka Baladweyne.
Guuleed Ibraahim oo kamid ahaa dadkii saarnaa doontii shalay ku degay Webiga ayaa Maanta waxaa Meydkiisa laga helay Baladweyne, waxaana sidoo kale uu ahaa Guddoomiyihii dhalinyarada Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir.
Guddiga loo xilsaaray baadi goobka dadkii doonta la degtay ayaa xaqiijiyay in la helay Meydka Guuleed Ibraahim, isla markaana ay wadaan gurmadyo kale oo baadi goob ah.
Waa Meydkii labaad ee Maanta la helay, iyadoona saakay deegaanka Shabelow laga helay Meydka Shariif Hassan Ganey (Shariif Carabey) oo kamid ah dadkii saarnaa doontii shalay Degtay, sidoo kalena kamid ahaa Ganacsatada Magaalada Baladweyne.
Baladweyne oo Weli Baadi Goob ka Socda